सुस्माको पेटको बच्चाको रिपोर्ट खुलासा, सुस्माको पेटमा बच्चा थियो कि थिएन ? – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Video/सुस्माको पेटको बच्चाको रिपोर्ट खुलासा, सुस्माको पेटमा बच्चा थियो कि थिएन ?
अब मोबाइल फोनका कुरा गर्न सिम कार्डको आवश्यकता नपर्ने भएको छ। किनभने अब यस्तो प्रविधिको विकास हुँदैछ, जसको प्रयोगबाट मोबाइल फोनमा कुरा गर्न सिम कार्डको आवश्यकता पर्दैन।यो प्रविधिको इन्टरनेट टेलिफोनी हो। इन्टरनेट टेलिफोनी प्रविधिमार्फत